Gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. – Radio Daljir
Gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Luulyo 13, 2016 11:52 g 0
(July 14 2016)-Ciidanka booliska ee gobolka Banaadir ayaa magaalada Muqdisho warbaahinta ugu soobandhigay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lasheegay in ladoonayey in goobo kuyaal magaalada lagu weeraro.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga gudaha Cabdikaamil Macalin Xirsi, aayaa sheegay in ciidamada NISA oo ku guda jira howlaha sugidda nabadgalyada ay heleen xog horseeday iney qabtaan hub iyo gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo lagu baarkimay wado uusan sheegin halka ay ku taalla.
Dhanka kalena afhayeenka ayaa sheegay inay baxsadeen kooxihii watay gaarigan, wuxuuna xusay iney bilaabeen qorshe cusub oo ay ku qiyaameynayaan shacabka si aan loo agaanin xiliyada ay isku gudbinayaan gaadiidka lagu soo diyaariyo qaraxyada.
IGAD oo shaacisay beesha madaxweynaha ka noqonaysa Shabeelaha dh. iyo Hiiraan.
Gudoomiyaha barlamaanka Soomaaliya oo gaarey wadanka Koonfur Africa,